Posted by pandora at 12:14 PM
ကဗျာတပုဒ်လုံးမှာ အဲဒီစာကြောင်းတွေက မျက်လုံးထဲကို တန်းကနဲ ဝင်လာတယ်...
တွေးစရာပဲ။ နယူတန် ရဲ့ တွက်ချက် အရဆို..၂၀၆၀ ဆိုတော့.. နှစ် ၅၀ ကျန်အုံးမယ်..။
ဒီကဗျာကို ဖတ်နေချိန်မှာ အပြင်မှာ လေတွေ ဟူးဟူးရားရား တိုက်ခတ်နေတယ်။ မုန်တိုင်းအဖျားခတ်တယ်ထင်ပါရဲ့။ အခုတလော ငလျင်အဖျားခတ်တာကိုလည်း ခံစားလိုက်ရသေးတယ်။
ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လူဖြစ်လာကြတော့လည်း ဂြိုဟ်မွှေတာလေးတွေကို ခံစားရပေဦးမပေါ့။
ကောင်းလိုက်တာ၊ တကယ်ကို တရား သံဝေဂ ရစရာ ကဗျာလေးပါပဲ။
မပူပါနဲ့ မပူပါနဲ့ မပူပါ.....နဲ့
သန်းပေါင်းခြောက်ထောင်သော သားကောင်တွေ ...
ကပ်ဆိုက်နေသော ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငိုညည်းသံ ...
ကလိယုဂ်ခေတ်မှာ လူဖြစ်လာရတာ ၀ဋ်ကြွေးပါလို့ ထင်ပါရဲ့။
မရေ..ကြောက်လည်း ကြောက်နေဆဲ ဒါပေမယ့် ...
အမည်မသိက မယ်ကိုးပါ။ ဘယ်လိုလုပ် sign in မဝင်ရသေးဘဲ နှိပ်မိသွားတာ =)
ဂြိုဟ်ပြာကြီးမှာ အချိန် ဘယ်လောက် ကျန်ပါသလဲ...
I B try2time management4ur sweet poem :)
Captivating. Thoughtful transformation of current affairs into art... :)
မနက်ဖြန်မှာနေမသာရင် မနက်ဖြန်ရဲ့ မနက်ဖြန်မှာ နေသာလိမ့်မယ်။
“အချိန်.. ဘယ်လောက်ကျန်ပါသလဲ” ဆိုတဲ့နေရာမှာ လန့်နိုးသူတစ်ယောက်လို ခံစားလိုက်ရပါတယ် အစ်မ။ “တကယ်တမ်းဖောက်ပြန်နေတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်” တစ်ခုထဲ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်လေ။ တကယ်တော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်တိုင်ကပါ သားကောင် ဖြစ်နေရှာသေးတာနော်...
ကပ်ကဗျာမှာ စိတ်ကိုလာ ကပ် သွားတယ်။
အစ်ပန်ရေ ... ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး ကပ်သုံးပါး အကုန်ကျရောက်နေတဲ့ ဒီလေထုထဲ .... အသက်တောင် ရှုလို့ မဝတဲ့အ ဖြစ်ကို မြင်သွား မိခံစားသွားမိပါတယ် ....
စိတ်တွေ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်လုမတတ်ပဲ။ ကပ် တဲ့လား။။။ အသက်တောင် မရှုနိုင်တော့ဘူး။ ဟူးးးးးးးးးး